ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် – အရြေႚတိုင်း ဒီမိုကရေစီ … ရာမယဏ | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← ကိုဌေးရကယြ်ိံငြ့် ဘီဘီစီ မေူးမန်းခန်း (၀၆-၀၉-၀၇)	ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လမ်းလ္တွောက်ဆိံ္ဋူပပြဲ အယ်လ်ဘေန္ဘီမြိႛ၌ူပလြုပ် →	ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် – အရြေႚတိုင်း ဒီမိုကရေစီ … ရာမယဏ	10
အရြေႚတိုင်း ဒီမိုကရေစီ … ရာမယဏဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇
အရြေႛတိုင်းယဉ်ကေဵးမနြဲႛ ဒီမိုကရေစီနဲႛ မထိုက်တန်ဘူးတိုႛ၊ အရြေႛတိုင်းယဉ်ကေဵးမအြရူပည်သူလူထုဟာ မိမိကိုယ်မိမိ အုပ်ခဵပြ်ိုံင်တဲ့ အရည်အခဵင်းမရြိဘူးတိုႛ ဒီလိုေူပာတာတြေ ရြိခဲ့ပၝတယ်။ အရင်အပတ်ကဆိုရင် အိံ္ဋယိုံင်ငံက ဇာတ်ဋ္ဌကီိးံစ်ြခုဖစ်တဲ့ မဟာဘာရတ နဲႛ ရာမယဏ ကို အေူခခံ္ဘပီးတော့ အရြေႛတိုင်းယဉ်ကေဵးမဟြာ လူထုရဲႛအခငြ့်အရေးတြေ၊ လုပ်ပိုင်ခငြ့်တြေ၊ လူထုရဲႛအင်အားတေကြို ဘယ်လောက်အလေးထားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ူပသြားခဵင်ပၝတယ်လိုႛ ကဵမေူပာခဲ့ပၝတယ်။ ဒီအပတ်မြာတော့ ရာမယဏ ဇာတ်တော်ဋ္ဌကီးအေုကာင်း ကဵမေူပာူပပၝမယ်။ ရာမဇာတ် ဆိုတာဟာ သူတိုႛအိံ္ဋိယမြာ ရာမယဏလိုႛ ခေၞပၝတယ်။ အရြေႛတောင်အာရြိုံင်ငံ ယဉ်ကေဵးမတြေအြပေၞမြာ အင်မတန်မြုသဇာလမြ်းမိုးမရြိတဲ့ ဇာတ်ဋ္ဌကီးတစ်ခုဖစ်ပၝတယ်။
ဒီတော့ ဒီဇာတ်ဋ္ဌကီးဟာ ဘာူဖစ်လိုႛ အရြေႛတိုင်ိးိုံင်ငံတေပြေၞမြာုသဇာလမြ်းမိုးမြ ရြိသလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖိုႛလိုပၝတယ်။ ရာမဇာတ်တော်ဋ္ဌကီးဆိုတာ “မင်းကောင်း“အေုကာင်းပဲလိုႛ ဒီလိုပဲကဵမကူမင်တယ်။ ကောင်းတဲ့မင်းမဵား၊ူမင့်ူမတ်တဲ့မင်းမဵားဟာ ဘယ်လိုလုပ်တယ်၊ ဘယ်လိုကိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်၊ ဒၝ …ိုံင်ငံရေးဘက်ကုကည့်ရင်အမဵားဋ္ဌကီူးမင်ပၝတယ်။ ကဵမိုံင်ငံရေးအူမင်နဲႛေူပာမြာပၝ။ ဘာသာရေးအူမင်နဲႛေူပာမြာမဟုတ်ဘူး၊ လောကီအူမင်နဲႛေူပာမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ပထမ စ္ဘပီးတော့ ဇာတ်ေုကာင်း ဆင်လိုက်တဲ့အခၝကဵတော့ ရာမမင်းသားဟာ၊ ရာမမင်းသားရဲႛ အူပစ်ေုကာင့်ပဲ ဆိုပၝတော့၊ တောထက်ြသြားရတာူဖစ်တယ်။ ဒၝကတော့ ဗုဒ္ဌဘာသာအူမင်နဲႛုကည့်ရင် ၀ဋ်လိုက်တာပေၝ့လေ။ ကံ ကံ ၏အကဵြိး၊ ကိုယ်လုပ်သလို ကိုယ်ူဖစ်တာ၊ ၀ဋ်လိုက်တဲ့ အကဵြိးပေၝ့။ ဒီ … ရာမမင်းသားရဲႛ ခမည်းတော်ဋ္ဌကီးဟာ မင်းသားဘ၀တုန်းက (ဒၝ ဟိံ္ဋဇြာတ်တော်ဋ္ဌကီးထဲက ကဵမေူပာတာနော်၊ ဟိံ္ဋဇြာတ်တော်ဋ္ဌကီးထဲကဆိုတောူ့မန်မာမဵားသိတဲ့ ရာမဇာတ်ထက် ပ္ဘိုပီး အသေးစိတ် ပၝပၝတယ်။) သူအရင် မင်းသားဘ၀တုန်းက တခၝကဵတော့ သူတောလိုက်ထက်ြတယ်တဲ့။ တောလိုက်ထက်ြတဲ့အခၝ မြာ သူက တောတိရစ္စာန် တကောင်ထင်္ဘပီးတော့ ခဵိန်္ဘပီးတော့ ပစ်လိုက်တာပၝ။ တကယ်တမ်းသြာုးကည့်တဲ့ အခၝကဵတော့ တိရစ္စာန်မဟုတ်ဘဲနဲႛ လူဖစ်နေတယ်။ အဲဒီလူကလည်း ရသေ့လေးပေၝ့လေ။ (သုဝဏ္ဆသာမဇာတ်နဲႛ နည်းနည်းဆင်တယ်။) သူရဲႛမဵက်စိမူမင်တဲ့ မိဘအိုဋ္ဌကီိးံစ်ြပၝးကို လုပ်ကေဋ္ဋးနေတဲ့ ရသေ့လေူးဖစ်တယ်။ ရသေ့လေးဟာ သူႛမိဘိံစ်ြပၝးထံ ခေၞသြားပၝဆ္ဘိုပီးတော့ ကယ်ြလန်ြသြားတယ်။ ကယ်ြလန်ြသြားတော့ မင်းသားက ရသေ့လေးရဲႛ မိဘိံစ်ြပၝးထံသြား္ဘပီးတော့ ဒီလိုပဲသူဟာမြား္ဘပီးတော့ မ္တွားနဲႛပစ်လိုက်တာမိုႛ သူတိုႛသားဟာကယ်ြလန်ြသြား္ဘပီလိုႛေူပာတော့၊ မိဘမဵားက သူႛကိုကဵိန်ဆဲလိုက်တယ် တဲ့။ “သူတိုႛမြာ အားကိုးစရာဆိုလိုႛ ဒီသားပဲရြိတယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ဒီလို လုပ်ခဲ့တဲ့သူဟာ အသက်ဋ္ဌကီးလာတဲ့အခၝကဵရင် အားကိုးစရာ သားမရြိဘဲနဲႛ စိတ်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲႛ သေပၝစေသောဝ် …“ ဆ္ဘိုပီးတော့ ကဵိန်ဆဲလိုက်တယ်လိုႛ ဒီလိုအေူပာရြိတယ်။ နောက်ကဵတော့ ဘုရင်ူဖစ်လ္ဘာပီး ရာမမင်းသားနဲႛတကြ တူခားသားတော်သုံးပၝး ဖြာူးမင်တော်မူတယ်။ ရာမမင်းသားဟာ အဘက်ဘက်က တော်တယ်။ မင်းကဵင့်တရားဆယ်ပၝးနဲႛ အုပ်ခဵပ်ြမယ့် မင်းသားဆိုတဲ့ လက္ခဏာအားလုံးရြ္ဘိပီးသာူးဖစ်တယ်။ ရာမမင်းသားကိုပည်သူလူထုကလည်း သိပ်္ဘပီးတော့ ခဵစ်တယ်။ မိမိတိုႛကို တနေႛကဵရင် ကောင်းကောင်းမန်ြမနြ် အုပ်စိုးသြားမယ့် ဘုရင်ကောင်ူးဖစ်လာမယ်ဆိုတာကို လက်ခံ္ဘပီးသာူးဖစ်တယ်။
ဒၝပေမယ့် အားလုံးက ဒီလိုလက်ခံထားသော်လည်း ရာမမင်းသားရဲႛ ညီတော် ဘာရတ ရဲႛ မိခင်ူဖစ်တဲ့မိဖုရားဟာလည်း သူႛရဲႛသားကို ဘုရင်ူဖစ်စေခဵင်လိုႛ ခမည်းတော်ဋ္ဌကီးကို “အရင်တုန်းကပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း၊ သူတောင်းထားတဲ့ ဆု ၂ဆုကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်း၊ သူႛသားကို ဘုရင်ေူမြာက်္ဘပီးတော့၊ ရာမမင်းသားကို ၁၄ိံစ်ြတိုင်တိုင် တောထက်ြသြားပၝစေ … “ ဆ္ဘိုပီးတော့ တောင်းဆိုတယ်။ တောင်းဆိုတော့ ဘုရင်ဋ္ဌကီးက သူ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိင်္စဆ္ဘိုပီူးငင်းတယ်။ူငင်းပေမယ့်လည်း သူကတိမတည်ရာ ရောက်တာပေၝ့။ အစတုန်းကတော့ ဆု ၂ဆုတောင်ိးိုံင်တယ်၊ တောင်းတာပေးမယ်လိုႛေူပာထား္ဘပီးမြ၊ အခုတော့ မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ သူဟာအင်မတန် “ကတိပဵက်တဲ့မင်း” … ။
ကတိပဵက်တဲ့ဘုရင်ဆိုတာ အင်မတန်မြ ရက်ြစရာကောင်းတဲ့ မင်းပဲ၊ ဒီတော့ သူသိပ်္ဘပီးရက်ြတော့ မဵက်ြိာံ မသာယာဘူး။ သားတော်လာတဲ့ အခၝကဵတော့ မေးတယ် တဲ့၊ ဘာူဖစ်လိုႛ ဒီလောက်တောင်မြ မဵက်ြိာံ မသာသလဲဆိုတော့ ဘုရင်ဋ္ဌကီးက ဘာမမြေူပာခင် ဟိုမိဖုရားက ၀င်္ဘပီးတော့ေူပာလိုက်တယ်။
“သူႛကိုဒီလိုကတိပေးခဲ့တယ်။ အခု ဒီကတိကိုမတည်ပၝဘူး“ ဆ္ဘိုပီးတော့ ၀င်ေူပာတော့ ရာမမင်းသားက၊ သားကောင်းမဵားဆိုတာ ဖခင်မဵားရဲႛကတိ တည်ရေးအတကြ် ဦးတည်္ဘပီးတော့ လုပ်ဆောင်ရမယ်၊ ဒၝ့ေုကာင့်မိုႛ ခမည်းတော်ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကိုတည်ပၝစေ၊ သားတော် တောထက်ြပၝမယ်ဆ္ဘိုပီးတော့ တောထက်ြခဲ့တယ်။
တောင်းတာပေးမယ်လိုႛေူပာထား္ဘပီးမြ၊ အခုတော့ မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ သူဟာအင်မတန် “ကတိပဵက်တဲ့မင်း” … ။ ကတိပဵက်တဲ့ဘုရင်ဆိုတာ အင်မတန်မြ ရက်ြစရာကောင်းတဲ့ မင်းပဲ၊
ဒီဇာတ်ဟာ ဘာူဖစ်လိုႛ လူုကိက်ြမဵားခဲ့သလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ထဲမြာပၝတဲ့ မင်းညီမင်းသား တော်တော်မဵားမဵားဟာ မင်းကောင်းပီသတယ်။ ရာမမင်းသားဟာလည်း မင်းကောင်ူးဖစ်မယ့် မင်းသားတစ်ပၝးပီသတယ်။ ရင်ြဘုရင်ဋ္ဌကီးကလည်း သူႛ အူပစ်တော့ သူရြိတာပေၝ့လေ၊ ဒၝပေမယ့် သူတတ်ိုံင်သမ္တွ သူႛတိုင်ူးပည်ကို ကောင်းကောင်းမန်ြမနြ် အုပ်ခဵပ်ြတယ်။ သူႛတိုင်ူးပည်ဟာ သူႛရဲႛအုပ်ခဵပ်ြမအြောက်မြာ အင်မတန်မြ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်း ပေဵာ်ပေဵာ်ရင်ြရငြ် ရြိတယ်လိုႛဆိုတယ်။
ရာမမင်းသားရဲႛ ညီတော်ကလည်း သူႛကိုနန်းပေးမယ်ဆိုတော့ သူကလက်မခံဘူး။ သူႛရဲႛ နောင်တော်သာလ္တွင် ဘုရင်ူဖစ်ထိုက်တယ်။ သူဟာနောင်တော်လောက်လည်း အရည်အခဵင်းမရြိပၝဘူး ဆ္ဘိုပီးတော့ သူကလက်မခံဘူး။ “ဟာ … ငၝရရင်တော့ ယူလိုက်မယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်လုံးလုံးမရြိဘူးနော်။ ဒၝတောင်တရားဝင် ပေးတာ၊ လ္ဘုပီးတော့ မခြဲိုံင် မခြိာိုံင် တယ်ြတာနေတာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီအခဵိန်မြာ ရာမမင်းသားဟာ တောထက်ြသြားရြ္ဘာပီ။ သူရဲႛညီတော် ဘာရတ က “နောင်တော်ူပန်လာပၝ။ ညီတော်အနေနဲႛ အုပ်ခဵပြ်ိုံင်တဲ့အရည်အခဵင်းလည်း မရြိဘူး။ အုပ်ခဵပ်ြသင့်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛူပန်္ဘပီးတော့ ရကလြာတော်မူပၝ … “ ဆိုတော့ ဟိုကူငင်းတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ “သားကောင်းမဵားဟာ ဖခင်ကတိတည်ရေးအတကြ် လုပ်ပေးရမယ်၊ ဖခင်မဵားဟာ အထူးသူဖင့် မင်း ဆိုလိုႛရြိရင် ကတိတည်ရတယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ၁၄ိံစ်ြတိုင်တိုင်တော့ သူပန်မလာဘူး။ “ ဆ္ဘိုပီးတော့ နေတဲ့အခဵိန်မြာ ညီတော်က “သူဟာ ဘုရင်မဟုတ်ပၝဘူး။ ဒီိုံင်ငံရဲႛ စစ်မန်ြတဲ့၊ တကယ့်တရားဝင်စစ်မန်ြတဲ့ ဘုရင်ဟာ ရာမမင်းသာူးဖစ်ပၝတယ်“ ဆ္ဘိုပီးတော့ပ ပလ္ထင်ပေၞမြာ ဘယ်တော့မြ မထိုင်ဘူး လိုႛ ဒီလိုပဲေူပာတယ်။ ပလ္ထင်ပေၞမြာ ရာမမင်းသားရဲႛ ဖိနပ်တစ်ရံကို တင်ထား္ဘပီးတော့၊ ဒီမင်းသားဟာ ပလ္ထင်အောက်ကနေ ထိုင်္ဘပီးတော့ တိုင်းရေူးပည်ရေးကို စီရင်တော်မူတယ်လိုႛ ဒီလိုပဲအဆိုရြိတယ်။ အဲဒီလောက် သူကလည်း မင်းသားကောင်းမဵားရဲႛ အရည်အခဵင်းနဲႛူပည့်စုံတယ်။
သူႛခမည်းတော်ဋ္ဌကီးခမဵာတော့ နတ်ရြာစံသြားရြာတယ်၊ စိတ်မကောင်ူးဖစ်္ဘပီးတော့။ ဟိုတုန်းက သူကဵိန်ဆဲခံထားရတဲ့ အတိုင်းပဲပေၝ့။ သူႛသားတော်ဟာ သူအတကြ်ေုကာင့် တောထက်ြသြားရတယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲႛ ၀မ်းနည်းပက်လက်နဲႛပဲ နတ်ရြာစံ သြားတယ်။
နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းကိုမန်မိာိုံင်ငံသူ၊ိုံင်ငံသားမဵားက သိုကပၝတယ်။ ရာမမင်းသားနဲႛ သီတာမင်းသမီး တောထက်ြသြားတဲ့အခဵိန်မြာ ပၝသြားတာက ရာမမင်းသားရဲႛညီတော် လက္ခဏ။ ညီတော် လက္ခဏ ဆိုတာကလည်း မင်းသား ကောင်းမဵားရဲႛ အရည်အခဵင်းနဲႛ အင်မတန်မြူပည့်ဝတယ်။ သူႛရဲႛနောင်တော်နဲႛ နောင်တော်ရဲႛုကင်ယာတော်ကို သူဘယ်လောက် ကဵြိးကဵြိြးိံိံြံ၊ုကည်ုကည်င်္ီိုင်္ီို၊ လေးလေးစားစားနဲႛူပစြုစောင့်ရြောက်တယ်ဆိုတာ မတ်ြတမ်းတင်လောက်တယ်။
ညီတော်က “သူဟာ ဘုရင်မဟုတ်ပၝဘူး။ ဒီိုံင်ငံရဲႛ စစ်မန်ြတဲ့၊ တကယ့်တရားဝင်စစ်မန်ြတဲ့ ဘုရင်ဟာ ရာမမင်းသာူးဖစ်ပၝတယ်“ ဆ္ဘိုပီးတော့ ပလ္ထင်ပေၞမြာ ဘယ်တော့မြ မထိုင်ဘူး လိုႛ ဒီလိုပဲေူပာတယ်။
ဒၝ့ေုကာင့် တခဵြိႛက “နောက်လိုက်ကောင်းဆိုရင် လက္ခဏ မင်းသားလိုဖစ်သင့်တယ်“ လိုႛ ဒီလိုပဲေူပာတယ်။ နောက်လိုက်ကောင်းဆိုရင် ကိုယ့်ရဲႛခေၝင်းဆောင်အပေၞမြာ အင်မတန်မြ သင်္စာရြိတယ်။ ရဲရဲရင့်ရင့်နဲႛ အကာအကယ်ြပေးတယ်။ သူႛရဲႛနောင်တော်ကို ခဵစ်သလိုပဲ၊ သူႛရဲႛမရီးကိုလည်း အင်မတန်မြ လေးစားတယ်။ အမေတစ်ယောက်လို သူဆက်ဆံတယ်။ ဒီလို …ူပစြုဆက်ဆံ္ဘပီးတော့ အရာရာမြာ ညာလက်ရုံးသဖယြ် နေခဲ့္ဘပီးတော့၊ ရာမ မင်းသားနဲႛ င်္ဒံဂီရိ ခေၝင်းဆယ်လုံးဘီလူးတိုႛ စစ်တေဘြာတြေူဖစ်ုကတဲ့အခၝမြာလည်း ရာမ မင်းသားရဲႛ ဘေးကန္ဘေပီးတော့ တခဵိန်လုံးတိုက်ခဲ့တယ်။
င်္ဒံဂီရိဘီလူးနဲႛ ရာမမင်းသားတိုႛ စစ်ူဖစ်ရတဲ့အေုကာင်းကလည်း အမဵားသ္ဘိပီးသာူးဖစ်ပၝတယ်။ င်္ဒံဂီရိက သီတာ မင်းသမီးကို ခိုးသြားတယ်။ ခိုးသြား္ဘပီးတော့ ဟိာုံမာန် မေဵာက်မင်းတိုႛနဲႛ လိုက်္ဘပီးတော့ တိုက်ုကတယ်။ တိုက်ုက္ဘပီးတော့ အမဵားအာူးဖင့် ကဵမတိုႛသိတဲ့ ပုံပင်တေမြာဆိုရင် င်္ဒံဂီရိအပေၞမြာ အိုံင်ယ္ဘူပီးတဲ့အခၝကဵတော့ ရာမမင်းသား၊ သီတာမင်းသမီး၊ လက္ခဏမင်းသားတိုႛူပန်လ္ဘာပီး ရာမမင်းသားကနေ နန်ူးပန်ယ္ဘူပီး အားလုံးပေဵာ်ပေဵာ်ရင်ြရင်ြနဲႛ္ဘပီးဆုံးသြားတယ် ဆိုတဲ့သဘောမဵြိး ဒီလောက်ပဲ သိုကရတယ်။
ဒၝပေမယ့် ဟိံ္ဋဇြာတ်တော်ဋ္ဌကီးမြာက အဲဒီလောက်နဲႛ မ္ဘပီးသေးဘူး။ ရာမ မင်းသားဟာ သူႛရဲႛနေူပည်တော်ကိုပန်ရောက်သြား္ဘပီဆိုတောူ့ပန်္ဘပီးနန်းတက်တဲ့အခၝကဵတော့ (မင်းကောင်းမဵားဆိုတာကူပည်သူလူထုရဲႛ စိတ်ထားက ဘယ်လို ရြိတယ်၊ူပည်သူလူထုထဲမြာ ဘာတြေေူပာနေတယ် ဆိုတာကို အ္ဘမဲနားစငြ့်၊ နားထောင်နေရတယ်။) နားစငြ့်၊နားထောင်နေတော့ ဘယ်လိုအသံတြေ ထက်ြလာသလဲဆိုတော့ … “သီတာ မိဖုရားဟာ င်္ဒံဂီရိ ခေၝင်းဆယ်လုံးဘီလူးရဲႛ နန်းတော်မြာ ဘယ်လောက်ုကာုကာနေခဲ့ရသလဲ၊ ဒီလိုအူခားသူရဲႛ နန်းတော်ထဲမြာနေခဲ့တဲ့ မိဖုရားဟာ သန်ႛစင်တယ်လိုႛ သူတိုႛမယူဆိုံင်ဘူး။”
ဒီလိုေူပာလာတော့ မင်းကောင်းမင်ူးမတ်မဵားဆိုတာူပည်သူလူထုေူပာတာကို လဵစ်လဵရြမြထားဘူး။ ငၝ့မိန်းမေူပာရပၝ့မလားဆ္ဘိုပီးတော့ အားလုံး အင်းစိန်ထဲ ထည့်လိုႛမရဘူး။ မင်းကောင်းမင်ူးမတ်မဵားဟာ ဒီလိုလုပ်လိုႛမရဘူး။ မိဖုရားကလည်း သူဟာအင်မတန်ူဖစြင်သန်ႛရငြ်းပၝတယ်။ သူကမေုကာက်ပၝဘူး။ ဒၝကိုပရဲပၝတယ်ဆ္ဘိုပီးတော့ မီးပုံထဲကို ဆင်ူးပတယ်။ မီးပုံထဲကို ဆင်း္ဘပီးတောူ့ပသော်ူငားလည်း မီးကသူႛကိုမလောင်ဘူး။ သူႛရဲႛူဖစြင်သန်ႛရငြ်းမြေုကာင့် မီးကလည်းအိံ္ဇရာယ်မ�ပိုံင်ဘူးလိုႛူပလိုက်တဲ့အခၝကဵတော့လည်း အားလုံးကောင်းသြား္ဘပီလိုႛ ဒီလိုပဲထင်ရတာပေၝ့လေ။ ထင်ရပေမယ့်လည်း ဒီကောလာဟလတေကြ မ္ဘငိမ်းသြားဘူး။ င်္ဒံဂီရိရဲႛနန်းတော်ထဲမြာ နေမိတဲ့မိဖုရားကိုပန်္ဘပီးတော့ ကောက်သင့်သလား၊ မကောက်သင့်ဘူးလား၊ အခဵီအခဵေူပာတာဆိုတာတေကြ ဆက်္ဘပီးတော့ရြိနေတယ်။
ဆက်္ဘပီးတော့ ရြိနေတဲ့အခၝကဵတော့ ရာမမင်းက သီတာမိဖုရားကိုပည်နယ်ိံင်ြဒဏ် ပေးလိုက်တယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတောူ့ပည်သူလူထုက သံသယရြ္ဘိပီဆိုမြူဖင့် သူဘယ်လိုပဲ သူႛစိတ်ထဲမြာရြိရြိ၊ူပည်သူလူထုရဲႛ အလိုကိုမဆန်ႛကဵင်ရဘူး တဲ့။ ဒၝဟာမင်းကဵင့်တရားထဲမြာ တစ်ခုပၝတယ်မဟုတ်လား။ူပည်သူလူထုရဲႛအလိုကို မဆန်ႛကဵင်ရဘူးဆ္ဘိုပီး သီတာ မိဖုရားကိုပည်ိံင်ြဒဏ်ပေးလိုက်တယ်။
ူပည်ိံင်ြဒဏ်ပေးလိုက်တော့ သီတာမိဖုရားဋ္ဌကီးဟာ တောထဲမြာနေရတယ်။ တောထဲမြာနေစဉ်ပဲ သူႛရဲႛအမြာပူး သားတော်လေိးံစ်ြပၝးကို ဖြာူးမင်တော်မူတယ်။ိံစ်ြပေၝင်းအတော်ုကာတဲ့အခၝကဵမြ … (ကဵမသေသေခဵာခဵာ မမတ်ြမိဘူး) တောလိုက်ရင်းနဲႛလား၊ ဘယ်လိုလားတော့မသိဘူး၊ ရာမမင်းသားရဲႛ အမတ်ဋ္ဌကီးမဵားဟာ ဒီသားတော်လေိးံစ်ြပၝးကို အေုကာင်ူးပ္ဘြပီးတောူ့ပန်ခေၞတာပေၝ့လေ။ မိဖုရားဋ္ဌကီးကိုပန်္ဘပီးတော့ခေၞတယ်။
ူပန်္ဘပီးတော့ခေၞပေမယ့် မိဖုရားဋ္ဌကီးက အင်မတန်မစြိတ်နာတယ်လိုႛေူပာရမလားမသိဘူး။ သူဟာဒီလောက်တောင်မြူဖစြင်သန်ႛရငြ်းလဵက်နဲႛ မီးထဲဝင်ူပ္ဘပီးတောူ့ဖစြင်သန်ႛရငြ်းပၝတယ်ဆိုတာကိုပိုံင်ခဲ့လဵက်နဲႛ ရာမမင်းက သူႛဘက်ကနေ မရပ်တည်ခဲ့ဘူး။ူပည်သူလူထုတခဵြိႛက ဝေဖန်တာကို လက်ခံ္ဘပီးတော့ သူႛအပေၞမြာဆက်ဆံတာ မတရားခဲ့ဘူးလိုႛ သူမင်တယ်။ အဲဒီတော့ သူဘယ်တော့မြ မိဖုရာူးပန်မလုပ်ခဵင်တော့ဘူး။
သူဟာဒီလိုပဲူဖစြင်တယ်ဆိုတာမန်ြရင် သူႛရဲႛဖခင်ူဖစ်တဲ့ေူမဋ္ဌကီးဟာ သူႛကိုပန်္ဘပီး သိမ်းပိုက်ပၝတော့ ဆ္ဘိုပီး အဓှိူာန်လုပ်တဲ့အခၝကဵတော့၊ ကဵမတိုႛကတော့ေူမူမြိတယ်၊ မကောင်းဘူးလိုႛထင်တယ်နော်။ ဒီလိုအဓိပဍ္ဎာယ်နဲႛ မဟုတ်ပၝဘူး။ေူမဋ္ဌကီးကနေူပန်္ဘပီးတော့ သိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတာ နည်းနည်ူးပန်ရငြ်ူးပရမယ်ဆိုရင် ကဵမတိုႛက ဗမာဆိုတော့ သီတာဟာ “ရေ“ ၊ ဒၝ့ေုကာင့် ရေနဲႛ ဆက်ိံယ်ြနေတယ်။ တကယ်တော့ သူတိုႛ sankrit စကားအရ Sita ဆိုတာ ရေဆိုတဲ့အဓိပဍ္ဎၝယ် မရောက်ပၝဘူး။ Sita ဆိုတဲ့အဓိပဍ္ဎၝယ်ဟာ သီတာရဲႛခမည်းတော်ဋ္ဌကီူးဖစ်တဲ့ ဇနက္ကမင်းဋ္ဌကီးဟာ လယ်ထန်ြမဂဿလာလုပ်နေတုန်းမြာ လယ်ထဲကနေ ဒီခလေးငယ်ငယ်လေး ထက်ြလာလိုႛ၊ လယ်ထန်ြရင်းနဲႛထက်ြလာတာမိုႛ ထနြ်ေုကာင်းဆိုတဲ့ အဓိပဍ္ဎာယ်ရြိတယ်။
Sita ဟာ “ပထ၀ီေူမဋ္ဌကီးနတ်ရဲႛသမီးတော်“ လိုႛ ဒီလိုသူတိုႛအယူရြိတယ်။ ဒၝ့ေုကာင့်မိုႛ သူႛရဲႛဖခင်ပထ၀ီေူမဋ္ဌကီးဟာ သူႛကိုပန်္ဘပီးတော့ လက်ခံတော်မူပၝဆိုတာ ကဵမတိုႛအူမင်နဲႛ ဆိုးလိုႛေူမူမြိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်အောင် ကဵမရငြ်ူးပတာပၝ။ အဲဒီတော့ ပထ၀ီေူမဋ္ဌကီးရဲႛမင်ူးဖစ်တဲ့ သီတာမိဖုရားရဲႛ ဖခင်အစစ်ကူပန်္ဘပီးတော့လက်ခံယူရတယ်။ လက်ခံတော်မူတော့ အဲဒီမြာဇာတ်လမ်းက္ဘပီးသြားတယ်။
ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းက ကဵမတိုႛစဉ်းစားစရာ အမဵားဋ္ဌကီးရြိတယ်။ စဉ်းစားစရာရြိတယ်ဆိုတိာိုံင်ငံရေးအူမင်နဲႛ အမဵားဋ္ဌကီးစဉ်းစားစရာရြိတယ်။ ဒၝကဵမတိုႛ အရြေႛတိုင်းမြာ အင်မတန်မြုသဇာလမြ်းမိုးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖစ်တယ်။ ကဵမတိုႛ အရြေႛတိုင်းသူ၊ အရြေႛတိုင်းသားတေဟြာ ဘယ်လောက်ိုံင်ငံရေးအူမင် ရင့်ကဵက်သလဲဆိုတာကိုပတယ်လိုႛ ကဵမတော့ ဒီလိုပဲူမင်တယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ သူဟာအူဖနြဲႛအမဲ၊ အကောင်းနဲႛအဆိုး ဒီလိုခဵည်းပဲရြိတာ မဟုတ်ဘူး။ ရာမမင်းရဲႛခမည်းတော်ဆိုရင်လည်း ကောင်းတာရြိတယ်၊ ဆိုးတာရြိတယ်။ အင်မတန်မကြောင်းတဲ့မင်းဋ္ဌကီူးဖစ်ခဲ့သော်လည်း သူႛအူပစ်တေရြိခဲ့တာေုကာင့်မိုႛ ဒီအူပစ်တေရြဲႛ ၀ဋ်ရေကြးကို သူဆပ်သြားရတယ်။
ရာမမင်းဆိုရင်လည်း အင်မတန်မကြောင်းတဲႛမင်းတစ်ပၝးပဲ။ ဒၝပေမယ့်လည်း တကယ်ုကည့်လိုက်တဲ့ အခၝမြာတော့ သူႛရဲႛမိဖုရားဋ္ဌကီးအပေၞမြာ မ္တွမ္တွတတ မဆက်ဆံခဲ့ဘူး။ သီတာမိဖုရားေူပာခဵင်တာက သူဖစြင်သန်ႛရငြ်းမနြ်း သိရဲႛသားနဲႛ သူမဵားေူပာတာတြေ ဘာူဖစ်လိုႛနားထောင်ရလဲ ဆိုတာကိုေူပာတာ၊ ဒီတော့ ဒၝကဵမတိုႛအတကြ် အမဵားဋ္ဌကီးစဉ်းစားစရာူဖစ်တယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အကောင်းဋ္ဌကီးပဲ မဟုတ်ဘူး။ သူႛရဲႛအားနည်းခဵက်တြေ ရြိတယ်ဆိုတော့ ဒီကိင်္စဟာဒီမိုကရေစီရဲႛ အားနည်းခဵက်တစ်ခုကို ထောက်ူပတယ်လိုႛ ကဵမေူပာခဵင်တယ်။ အမဵားကနေ အလကားသက်သက် သြားပုတ်လေလငြ့်၊ အားအားယားယားေူပာနေတဲ့ ကိင်္စတေဟြာ တခၝတလေ ဒီမိုကရေစီမြာလည်း လမြ်းမိုးတတ်တယ်။ အဲဒီဟာတေကြို ကဵမတိုႛအမဵားဋ္ဌကီး သတိထားရမယ်။
ကဵမကတော့ထင်တယ်။ အခုခေတ်အေူခအနေဆိုရင် သတင်းစာတေဘြာတေရြ္ဘိပီးတော့ သတင်းစာလတ်ြလပ်ခငြ့် ရြိတယ်ဆိုရင် သီတာမိဖုရားဋ္ဌကီးဘက်ကန္ဘေပီးတော့ ရေးပေးမယ့် သတင်းစာတြေ အမဵားဋ္ဌကီးရြိမြာပဲလိုႛ ကဵမထင်တယ်။ အဲဒီလိုသာရြိခဲ့ရင် သက်သက် အားအားယားယား အတင်းေူပာနေတဲ့လူတြေေုကာင့် ဒီမိဖုရားဋ္ဌကီးဟာူပည်ိံင်ြဒဏ်အပေးခံရမြာ မဟုတ်ဘူးလိုႛ ကဵမက ဒီလိုမင်တယ်၊ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ သီတာမိဖုရားဖက်ကနေ ရပ်တည်တဲ့သတင်းစာတေကြ ရေုးကမြာကိုး။
“ဘယ်ိံယြ့် မီးထဲဝင်တာတောင်မြ မလောင်တဲ့မိဖုရားဟာ မူဖစြင်ဘဲရြိုံင်ပၝ့မလား။ မင်းတိုႛမန်ြရင်၊မင်းတိုႛရဲရင်၊ စပ်ြစြဲနေတဲ့လူတြေ မီးထဲဝင်ုက … ” လိုႛေူပာမြာပေၝ့။ စပ်ြစြဲနေတဲ့လူတေကြရော မီးထဲကိုဝင်ူပရဲမလား။ ၀င်ရင်ရော သူတိုႛဟာ မီးမလောင်ဘဲ နေမလား။ ဒၝတေဟြာ အမဵားဋ္ဌကီးစဉ်းစားစရာူဖစ်တယ်။
အဲဒၝေုကာင့် ရာမဇာတ်တော်ဋ္ဌကီးဟိာိုံင်ငံရေးပညာ အမဵားဋ္ဌကီးပဲ ပၝပၝတယ်။ ဒၝဟာ ကဵမတိုႛဒီမိုကရေစီ လိုအပ် တယ်ဆိုတာ ကဵမတိုႛ အရြေႛတိုင်းယဉ်ကေဵးမအြရ အထောက်အထားတြေ အမဵားဋ္ဌကီူးပိုံင်ပၝတယ်။ အဲဒီလို အဖက်ဖက်ကပေၝ့လေိုံင်ငံရေးအူမင်နဲႛ စဉ်းစားတဲ့ဇာတ်တြေ ကမ္တာမြာနည်းပၝတယ်။ အမဵားအာူးဖင့် ပုံပင်တြေ ဒဏ္ပာရီတေဆြိုရင် နောက်ဆုံးမြာ ပေဵာ်ပေဵာ်ရင်ြရင်ြနဲႛ္ဘပီးသြားတာတိုႛ၊ ဒၝမမြဟုတ်ရင်လည်း သိပ်္ဘပီးတော့ စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာတေဆြိုရင်လည်း တစ်ယောက်မမြကဵန်အောင် အားလုံးရငြ်းလင်း သုတ်သင်ပစ်လိုက်တာတိုႛ ဒၝတေရြိတတ်ုကတယ်။ ဒီလိုအူဖနြဲႛအမည်းတင် မဟုတ်ဘဲနဲႛ အူဖနြဲႛအမည်ုးကားမြာ မီးခိုးရောင်အမဵြိးမဵြိးရြိတဲ့ ဇာတ်မဵြိးဆိုတာ သိပ်ခေတ်မီတယ်လိုႛေူပိာိုံင်တယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ အမန်ြတရားဟာ ခေတ်မရြိဘူးရယ်လိုႛ ဘယ်တော့မမြူဖစ်ိုံင်ဘူး။ ဒၝ့ေုကာင့် ကဵမတိုႛလိုခဵင်တဲ့စနစ်ဟာ ကမ္တာဋ္ဌကီးတည်သ၍ ဒီစနစ်မဵြိးဟာ လိုလားအပ်တဲ့ စနစ်မဵြိးကိုဖစ်မြာပဲ။
ဒီစနစ်ဟာူပည်သူတေကြို အကာအကယ်ြပေးတဲ့ စနစ်လည်ူးဖစ်တယ်၊ အစိုးရမဵားကို ကာကယ်ြပေးတဲ့စနစ်လည်ူးဖစ်တယ်။ တခဵြိႛအစိုးရတေဟြာ ဒီလိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မိံစ်ြသက်ဘူး၊ူပည်သူလူထုကိုသာ အကာအကယ်ြပေးတဲ့စနစ်လိုႛ သူတိုႛထင်တယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပၝဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းကို အကာအကယ်ြပေးတဲ့ စနစ်ပၝ။
ကဵမတိုႛကို တခဵြိႛကမေးတယ်၊ ဒၝလည်းအားလုံးသိနေတဲ့ ကိင်္စဋ္ဌကီးပၝ။ ဒီမိုကရေစီတက်လိုႛရြိရင် ဘယ်သူဘယ်ဝၝကို ကလဲ့စားခေဵမြာလား၊ မေးတယ်။ ကဵမကေူပာတယ်၊ ကလဲ့စားခေဵတယ်ဆိုတာ ကဵမတိုႛရဲႛ “မူ” လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီအရ ကလဲ့စားခေဵခဵင်တိုင်း လိုက်ခေဵလိုႛရတာ မဟုတ်ဘူး။ တရားမ္တွမ္တွတတ လုပ်ရတာ။
အခုေူပာခဵင်တာက “အရြေႛတိုင်းဒီမိုကရေစီ“။ ဒီမိုကရေစီ အခငြ့်အရေူးပည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဆိုလိုခဵင်တာ။ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီထက်ပ္ဘိုပီးတော့ မေတ္ဇာတရားနဲႛူပည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုႛ ဒီလိုကဵမတိုႛူမင်ခဵင်ပၝတယ်။ အားလုံးအတကြ် ကောင်းတဲ့စနစ်ူဖစ်ရမယ်။ တခဵြိႛကဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရဲႛ အဓိပဍ္ဎာယ်ကို နားမလည်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲႛအိံစ်ြသာရကို နားမလည်ဘူး။ အတိုက်အခံမဵားဟာ တိုက်တယ် ခိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အာဃာတတရားနဲႛ ဖဵက်ဆီးခဵင်လိုႛ တိုက်တယ်လိုႛထင်ုကတယ်။ ကိုယ့်စိတ်နဲႛ ကိုယ်ြိံင်းတာလည်ူးဖစ်ိုံင်တာပေၝ့။ အဲဒီလိုစိတ်တေကြလည်း အမဵားဋ္ဌကီးရြိတယ်။ ဒၝပေမယ့်ဒၝဟာ လုံးလုံးမဟုတ်ဘူး။ အတိုက်အခံမဵားရဲႛ အလုပ်ကိုက အစိုးရမမြားအောင်လုပ်ဖိုႛပဲ။
အစိုးရမမြားအောင်ဆိုတော့ အစိုးရမြားနေတာတေကြို ထောက်ူပရမယ်။ ထောက်ူပမသြာလ္တွင် မမြားအောင်လုပ်ိုံင်မြာပေၝ့။ ကိုယ်ဘာမြားမနြ်း မသိဘူး၊ ဒၝမမြဟုတ် သိရင်လည်း ဘယ်သူမမြေူပာရဲဘူးဆိုရင် ဆက်္ဘပီးတော့မြားနေမြာပေၝ့။ ဒီတော့ ကဵမတိုႛက အတိုက်အခံဆိုတော့ အတိုက်အခံအလုပ်ပဲလုပ်မြာပဲ။ ဆက်္ဘပီးတော့ လုပ်မြာပဲ။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ကဵမတိုႛကတော့ အာဃာတစိတ်နဲႛ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ိံလြုံးသားထဲမြာ အာဃာတအင်မတန်မမြဵားနေတဲ့ လူတေကြတော့ ယုံမြာမဟုတ်ဘူး။ ဒၝကိုတော့ ကဵမတိုႛဘာမြ မတတ်ိုံင်ဘူး။ အဲဒီိံလြုံးသားထဲက အာဃာတတေကြို ဖေဵာက်လိုက်ပၝလိုႛ ဒၝပဲေူပိာိုံင်တယ်။ ဖေဵာက်လိုက်ရင်တော့ ယုိံိုံင်ပၝလိမ့်မယ်။
ဒီမိုကရေစီိုံင်ငံတေကြိုကည့်ရင် ဒၝကိုသိုံင်ပၝတယ်။ ရြေးကောက်ပြဲမတိုင်ခင် နောင်ဂဵိန်နောင်ဂဵိန် ခဵနေတဲ့သူမဵားဟာ ရြေးကောက်ပြ္ဘဲပီးတော့ လက်ဆြဲိံတ်ြဆက်္ဘပီး၊ ယဉ်ကေဵးသိမ်မြေႛတဲ့သူမဵားပီပီ ဆက်ဆုံကတာပၝပဲ။ ဒၝ ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ပဲ။ ကဵမတိုႛအရြေႛတိုင်းယဉ်ကေဵးမအြရ ဒီလို လူပီပီနေတဲ့စနစ်ကို အင်မတန်မလြိုလားပၝတယ်။ လူတေကြိုလူလို ဆက်ဆံတဲ့စနစ်ကို အင်မတန်မြ လိုလားပၝတယ်။ူပည်သူလူထုကို တန်ဖိုးထားတဲ့စနစ်ကို ကဵမတိုႛအရြေႛတိုင်းက အင်မတန်မြ လိုလားပၝတယ်။ ။
(မတ်ြခဵက် – ၁၉၉၅/၉၆ ခိုံစြ် မိန်ႛခနြ်းမဵားမြ ကောက်ိံတ်ြဖော်ူပပၝသည်။)
သရုပ်ဖော်ပုံမဵားမြာ အင်တာနက်က ကူးယူထားတာူဖစ်သည်၊
Posted by maungyit on September 10, 2007 in Uncategorized
← ကိုဌေးရကယြ်ိံငြ့် ဘီဘီစီ မေူးမန်းခန်း (၀၆-၀၉-၀၇)	ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လမ်းလ္တွောက်ဆိံ္ဋူပပြဲ အယ်လ်ဘေန္ဘီမြိႛ၌ူပလြုပ် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Beruma Games	Top Posts	Brokenhearted writer	Cartoon Saw Ngo - 2010, you will see the true color of Tatmadaw (again!!!)	Independence Day stamps	Cartoon Saw Ngo - Tatmadaw never turn his back to their dictatorship	astrology, correction and company	journal pieces on June 29	Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (28th July 2011)	Burmese Community and Burmese American Democratic Alliance celebrate DASSK 64 Event (Video Document)	My Acedamy Sein - No Acedamy according to me	Story Telling of Thakhin Tin Mya - The feud between Ne Win & Aung Gyi	Archives	September 2011 (104)
Top Clicks4.bp.blogspot.com/-Rtr4BA…moemaka.files.wordpress.c…Blog Stats	188,347 hits